Ubuhlungu izinhlangothi esiswini: kungenzeka izimbangela
Ubuhlungu ezinhlangothini besisu ngokuvamile isebenze kunoma iyiphi indawo ethile. Evamile, ingxenye phambi engezansi yomzimba zingahlukaniswa zibe quadrant ezine. Ngoba noma yisiphi ubuhlungu ukuvela kokuthi esiswini, kufanele luphathwe wemfanelo okhethekile, njengoba imizimba eziningana elise ingaphakathi layo. Ikakhulukazi, kukhona esiswini, nenyongo sesinye, ubende, isibindi kanye nabanye.
Ubuhlungu esiswini ezinhlangothini
isimo esinjalo kungase kuphakame ngesisekelo izinqubo ukuvuvukala emathunjini aphansi. Ngesikhathi esifanayo waphawula nezinye izimpawu. Ngokwesibonelo, esihlalweni uphatheke kabi, ukubuyisa. Ukuze kuxazululwe le isimo, kutuswa isikhathi ukhawule ukusetshenziswa okubabayo futhi kushisa izinongo, izithelo nemifino, isinkwa esinsundu, ubisi. Uma ubuhlungu emaceleni esiswini ngeke isebenze ngemuva kulandela Ukudla, kufanele uvakashele udokotela. Mhlawumbe, ngemva Uchwepheshe wokuhlola linqume noma yimuphi umuthi. Owesifazane has ubuhlungu esiswini ephansi ohlangothini lwesobunxele zingase zibonise ukuthi pheshana urinary egunjini lokuhlolwa kwezifo. Ngezinye izikhathi isimo siba ukuhlanza kuyinkimbinkimbi nomkhuhlane. Nokho, uma le ubuhlungu emaceleni esiswini livela ngempela kabanzi nhlangothi zombili, bese kungase kukhombise torsion ku pedicle i simila wesibeletho. Kulokhu, lo msebenzi ngeke yini kulokhu, kufanele ngokushesha shayela i-ambulense. ubuhlungu olunamandla emaceleni esiswini eduze imbilapho kwenzeka uma ukuvuvukala izinto ezihlobene. Lokhu kwandisa izinga lokushisa. Lapho umuzwa kulendawo abesifazane futhi ukuzwa ubuhlungu obukhulu. Kungcono ukubiza i-ambulensi, kodwa uma isiguli sifuna ukwazi ukuhamba ngokuzimela, kubalulekile ukuya kudokotela. Kwenze Kunconywa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ubuhlungu esiswini kanye izinhlangothi (ngezansi okuyingxenye) kungaba umphumela ukhulela ethunjini. Kuzo zombili izinhlangothi izimpawu ezingajwayelekile kuleli cala. Ubuhlungu kulesi simo ngokuhamba kwesikhathi uyanda futhi angase abe colicky. Kulokhu, kufanele ushayele i-ambulense futhi ubani ihlinzeka ukuphumula ngaphambi kokufika kudokotela.
Esikhathini esiswini phezulu kuloluya hlangothi kuyingxenye emathunjini, kwesibindi, nenyongo sesinye, ingxenye diaphragm. Ukugula noma ukulimala kwazo lezi zitho kungabangela isifo sokugembula. Uma ubuhlungu itholakala esifundeni hypochondrium, kungenzeka, yisishiso kwesibindi. Ukuze ususe ukusha kwesibindi kohlobo B kufanele ubonane nodokotela. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi uma ubuhlungu ehlelekile. Isimo sokugembula kungenzeka kubangelwa isifo gallbladder. Lapho wawubonakalisa ezingavamile ubuhlungu kufanele sinake Ukudla, ekunciphiseni noma ekuqedeni okunamafutha ukudla okunezinongo. Ukungakhululeki kungenzeka ngenxa ukuthuthukiswa pancreatitis. Ngokuvamile, i-pathology enjalo esivamile kubantu abaphethwe isifo gallbladder. Nge njalo ukubonakaliswa izimpawu Kunconywa ukuba wenze ultrasound, bahlolelwe. Pancreatitis - isifo okudinga ekuhlonzweni nasekwelashweni. Kwezinye izimo ubuhlungu kubangelwa isifo sezinso. Ikakhulukazi, imbangela isimo bangaba avuvukele, ithumba, isihlabathi noma amatshe.
Ubuhlungu ezansi kwesokudla
Kule ngxenye ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu elise amathumbu, isithasiselo, ureter. Abesifazane kule ndawo futhi amashubhu fallopian. Okokuqala, uma kwenzeka isimo sokugembula ukubekela eceleni appendicitis. Lesi sifo libhekene izimpawu of yenziwe yaba yasendaweni emhlabeni inkaba. Uma kungakapheli amahora 12 umfutho inakekelwa, kufanele ngokushesha okubiza udokotela.
Amazinga e usana - yisizathu alamu?
Kanjani ukuyeka nomongozima. Kungani igazi ikhala ekuseni. Ngokuvamile kukhona ngopha emakhaleni
Kungenzeka yini ukuba uthole abakhulelwe ngokushesha ngemva ngokuya esikhathini? Kukhona umbuzo - impendulo!
Wahlaba umlenze wakhe nge nail. Okufanele ukwenze esimweni esinjalo?
"Volvo" - yokulahla amaloli abantu sina!
Kungani ubuhlungu olimi Izimbangela
IsiZulu Itilosi futhi owathola Dzheyms Awe-Kuk. Biography, umlando travel
Yini igcwele "Izimbali Kobubi" ka Baudelaire?